Manatsara ny fandanianao Webinar: Webinar ROI Calculator | Martech Zone
Fantatrao ve fa, amin'ny salanisa, Ireo mpivarotra B2B dia mampiasa tetika marketing 13 samihafa ho an'ny fikambanany avy? Tsy fantatro ny momba anao, fa izany dia manome ahy aretin'andoha mieritreritra fotsiny momba izany. Na izany aza, rehefa tena mieritreritra an'izany aho dia manampy ny mpanjifanay hampiasa an'izany tetika marobe izany isan-taona izahay ary hiakatra izany isa izany satria mihalehibe ireo mpampita vaovao. Amin'ny maha mpivarotra antsika dia tsy maintsy ataontsika loha laharam-pahamehana ny fotoana sy ny fotoana handaniantsika ny fotoanantsika raha tsy ho vitantsika mihitsy izany!
Herintaona lasa izay dia nanomboka niara-niasa tamin'ny ReadyTalk izahay, a sehatra lozisialy webinar, ary nametraka ny andian-dahatsoratra webinar anay manokana izahay hijerena ny momba ny tabataba rehetra. Nahazo mpitarika 600 mahery izahay nandritra ny webinar 3 ho an'ireo mpiara-miasa aminay, ary manodidina ny 25 - 30% amin'izy ireo no nivadika ho mpitarika mahay. Tsy ilaina intsony ny milaza azy fa ny webinar dia nanjary iray amin'ireo tolo-kevitra ambony indrindra ho an'ny tetikady marketing tamin'ny 2014.
Ho an'ny famakiana fanampiny momba ny fampiroboroboana tranonkala web, vakio ny lahatsoratro momba ny toro-hevitra momba ny fampiroboroboana tranonkala webinar, Torohevitra 10 hampiroboroboana ny tranonkala manaraka.
Rehefa mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fanentanana amin'ny marketing miaraka amin'ny mpanjifanay izahay dia mijery hatrany ny ROI amin'ny ezaka ataontsika ary iza amin'ireo no hitarika fiovam-po bebe kokoa. Na dia nahita fiovam-po tamin'ny webinar aza izahay, dia te hikajiana ny ROI ihany koa. Tamin'izay izahay no nanapa-kevitra ny hiara-hiasa amin'ny ReadyTalk ary hamorona kajy izay manome izany: kajy amin'ny ROI webinar.
Na nampiasa tranonkala web taloha ianao na vao manomboka dia azonao atao ny mampiasa ity calculer ity mba:
Fantaro hoe inona ny programa webinar / ho vidinao,
Makà tolo-kevitra ho an'ny ROI tsara kokoa,
Ampitahao ny vidiny amin'ny sokajy rehetra ary
Fantaro ny fomba ahafahanao mampiasa tranonkala web ho an'ny orinasanao.
Fantaro izao ny ROI webinaranao:
Ampiasao ny ReadyTalk's ROI Calculator
Disclosure: ReadyTalk dia mpanjifanay ary mpanohana an'i Martech Zone.
Tags: Marketing WebinarCalculator ReadyTalkfanisana roikajy roifihaonambe webconferencing webfivoriana amin'ny tranonkalawebinar roi